Fampiasana 6 ho an'ireo manana Fibromyalgia | Fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena zatra ny Fibromyalgia
6 Fanatanjahantena ho an'ireo manana Fibromyalgia
12 / 09 / 2017 /Fanamarihana 0/i aretin-kozatra, Ny fanaintain'aretina, Fanazaran-tena sy fanatanjahan-tena/av loza
Fibromyalgia dia aretina mitaiza izay miteraka fanaintainana miakatra ary mampitombo ny fahatsapana ny hozatra sy ny hozatra.
Ny toe-javatra dia mety hahatonga ny fampiofanana tsy tapaka ho tena sarotra ary saika tsy ho vita indraindray - noho izany dia nanangona programa fanofanana misy fanazaran-tena malefaka 6 natao ho an'ireo izay manana aretin-kozatra. Antenaina fa afaka manome fanamaivanana sy manampy anao amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa izany. Manoro hevitra ihany koa izahay fiofanana amin'ny dobo rano mafana raha manana fahafahana hanao izany ianao.
- Ao amin'ny departemanta interdisciplinary ao amin'ny Vondtklinikkene any Oslo (Lambertseterary Viken (Eidsvoll Sound og Råholt) Ny mpitsabo anay dia manana fahaiza-manao matihanina miavaka amin'ny fanombanana, fitsaboana ary fanofanana fanarenana ny fanaintainana mitaiza. Tsindrio ny rohy na eto raha te hamaky bebe kokoa momba ny departemantantsika.
Bonus: Midira hijerena horonan-tsary fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fanazaran-tena natao ho an'ireo manana fibromyalgia, ary hamaky bebe kokoa momba ny teknika fialan-tsasatra.
Vakio koa: Torohevitra 7 mba hiaretana amin'ny Fibromyalgia
Lahatsary: ​​Fanatanjahan-tena 6 ho an'ny herin'ny Fibromyalgia
Eto ianao dia mahita fandaharana fanatanjahan-tena voatokana ho an'ireo manana fibromyalgia novolavolain'i kiropraktika Alexander Andorff - fiaraha-miasa amin'ny physiotherapist sy ny ekipan'ny rheumatism eo an-toerana. Kitiho ny horonan-tsary eto ambany raha hahitanao ny fanazaran-tena.
Manambatra ny fianakavianay ary misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube izahay ho an'ny toro-hevitra momba ny fanatanjahan-tena maimaim-poana, programa fanatanjahan-tena sy fahalalana ara-pahasalamana. Tonga soa!
Lahatsary: ​​Fanaovana fanatanjahantena 5
Fibromyalgia dia miteraka fitomboan'ny fanaintainan'ny hozatra sy ny fihenjanana hozatra. Ity ambany ity ny fanazaran-tena dimy izay afaka manampy anao hamaha ny hozatra sy ketrona mafy.
Tianao ve ireo horonan-tsary? Raha nankafizinao izy ireo dia tena mankasitraka anao izahay misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube anay ary manome anay ankihibe amin'ny media sosialy. Midika be izany ho antsika. Misaotra betsaka!
Miaraka iadiana amin'ny fanaintainan'ny fanaintainana
Manohana ny olon-drehetra mijaly amin'ny adin'izy ireo izahay ary manantena izahay fa hanohana ny asanay izahay amin'ny alàlan'ny sitraka amin'ny tranokalanay Facebook ary misoratra anarana amin'ny fantsona video izahay YouTube. Te hamantatra momba ny vondrona mpanohana ihany koa izahay Rheumatism sy fanaintainan'ny aretina - Norvezy: Fikarohana sy vaovao - izay vondrona Facebook maimaim-poana ho an'ireo manana fanaintainana mitaiza izay ahitanao fampahalalana sy valiny.
Ny fifantohana bebe kokoa dia tokony hapetraka amin'ny fikarohana mikendry ny toe-javatra misy fiantraikany amin'ny maro - izany no antony angatahanay anao hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy, tsara indrindra amin'ny alàlan'ny pejinay Facebook ary manaova hoe: "Eny ho an'ny fikarohana bebe kokoa momba fibromyalgia". Amin'izany fomba izany dia afaka mahatonga ny 'aretina tsy hita maso' hita maso kokoa.
Fanatanjahan-tena sy malemy fanahy
Zava-dehibe ny fahalalana ny fetrany mba hialana amin'ny "flare-ups" sy ny fahasimbana. Noho izany dia tsara kokoa ny manandrana fiofanana tsy dia manara-penitra fa tsy mandray ny "fihazonan'ny mpanao sipa", araka izay azon'ireto farany atao, raha mametraka tsy mety ny vatana ary miteraka fanaintainana bebe kokoa.
Vakio koa: Fandrika malaza iray izay mety hanimba ny fibromyalgia
Kitiho ny sary etsy ambony mba hovakiana ilay lahatsoratra.
1. Relaxation: Teknolojian'ny fofonaina & Acupressure
Ny fofona-panafody dia fitaovana manan-danja amin'ny ady atao amin'ny fihenjanana hozatra sy ny fanaintainana miaraka. Miaraka amin'ny fofonaina mety tsara dia mety hiteraka haingam-pandeha ao amin'ny rojo vy sy ny fihenan'ny hozatra mifandray ary koa mitarika ny fihenan'ny fihenjanana hozatra.
Ny fitsipika fototra amin'izay heverina ho teknikam-pisainana lalina fototra voalohany dia ny mifoka rivotra sy mivoaka in-5 ao anatin'ny iray minitra.. Ny fomba hahatratrarana izany dia ny fisosony lalina sy fanisana ny faha-5, alohan'ny hamoahana mafy sy isaina ho 5.
Ny mpitsabo ao ambadik'ity teknika ity dia nahita fa misy vokany tsara amin'ny fiovaovan'ny tahan'ny fony izany hoe efa napetraka amin'ny hafanana avo kokoa ary vonona kokoa hiady amin'ny fihetsiky ny fihenjanana.
fanoherana fifohana rivotra
Ny teknikam-pisefoana fantatra iray hafa dia ny fofonaina manohitra ny fanoherana. Izany dia tokony hampiadana ny vatana ary hiditra amin'ny toerana milamina kokoa. Ny teknika fofon'aina dia tanterahana amin'ny alàlan'ny fofon'aina ary avy eo misento avy eo amin'ny vava saika mihidy - mba tsy hisian'ny elatra lavitra be ny molotra ary mila 'manosika' ny rivotra ianao amin'ny fanoherana.
Ny fomba mora indrindra amin'ny fanatanterahana ny 'fisefoana fanoherana' dia ny fofonaina ao anaty vava ary avy eo amin'ny orona.
Relaxation miaraka amin'ny Acupressure Mat
Ny fandrefesana tena tsara hampitony ny fihenjanan'ny hozatra ao amin'ny vatana dia azo ampiasaina isan'andro tsihy akupresy (jereo ohatra eto - misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy). Manoro hevitra anao izahay hanomboka amin'ny fotoam-pivoriana eo amin'ny 15 minitra ary avy eo mandroso mankany amin'ny fotoam-pivoriana lava kokoa satria lasa mandefitra kokoa amin'ireo teboka fanorana ny vatana. tsindrio eto hamaky bebe kokoa momba ny tsihy fialan-tsasatra. Ny tena mahafinaritra amin'ity variana ampifandraisinay ity dia miaraka amin'ny ampahany amin'ny tenda izay manamora ny fiasana amin'ny hozatra mafy amin'ny tendany.
2. fanafanana sy fanatanjahana
Ny fihenjanana sy ny fanaintainan'ny hozatra dia matetika ampahany mankaleo amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo voan'ny fibromyalgia. Noho izany dia zava-dehibe kokoa ny mitazona ny vatana amin'ny fanenjanana tsy tapaka sy ny hetsika maivana mandritra ny andro - ny famelarana matetika dia mety hahatonga ny tononkira hihetsika mora kokoa ary hikoriana amin'ny hozatra tery ny ra.
Marina indrindra izany ho an'ireo vondrona hozatra lehibe toy ny tantanana, ny hozatra tongotra, ny hozatry ny seza, ny lamosina, ny tendany ary ny soroka. Maninona raha manandrana manomboka ny andro amin'ny fivoriana fanitarana maivana mikendry ireo hozatra lehibe kokoa?
3. Fanatanjahan-tena mitambatra ho an'ny rehetra sy ny tendany
Ity fanatanjahan-tena ity dia manenjana sy manetsika ny hazondamosina amin'ny fomba malefaka.
Manomboka Position: Mijoroa eo amin'ny lafiny efatra amin'ny tohatra fanazaran-tena. Miezaha hitandrina ny tendanao sy ny lamosinao amin'ny toerana tsy miandany, na dia lava kokoa
Manenjana: Ampidino amin'ny voditongotrao ny vozonao - amin'ny hetsika tony. Aza hadino ny mitazona ny curve tsy miandany amin'ny hazondamosina. Mihazona ny sakeliny 30 segondra eo ho eo. Fitafiana ihany no miverina mandrapahatonga anao mahazo aina.
Impiry?Avereno in-4-5 ilay fanazaran-tena. Ny fanazaran-tena dia azo atao in-3-4 isan'andro raha ilaina.
4. Fiofanana amin'ny rano mafana
Betsaka ny olona voan'ny fibromyalgia sy rheumatic tsy mahomby no mandray soa avy amin'ny fampiofanana ao anaty dobo filan'ny rano.
Ny ankamaroan'ny olona manana fibromyalgie, rheumatism ary fanaintainana mitaiza dia mahafantatra fa ny fanazaran-tena amin'ny rano mafana dia mety ho malefaka kokoa - ary mifantoka kokoa amin'ny tonon-taolana sy ny hozatra marary.
Izahay dia mihevitra fa ny fiofanana amin'ny dobo mafana dia tokony ho toerana ifantohana amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny hozatra lava sy ireo aretina miaraka. Indrisy, ny marina dia ny fanolorana tolotra toy izany dia mihidy tsy tapaka noho ny tsy fahampiana any amin'ny monisipaly. Manantena izahay fa hiverenana io fironana io ary mifantoka bebe kokoa amin'ity fomba fiofanana ity.
5. Fanatanjahantena malemy fanahy sy fampiofanana momba ny hetsika (miaraka amin'ny VIDEO)
Ity misy fifantenana fanazaran-tena manokana ho an'ireo manana fibromyalgie, aretina mitaiza hafa ary aretin'ny rheumatic. Manantena izahay fa mahasoa anao izy ireo - ary misafidy ny hizara azy ireo koa ianao (na ny lahatsoratra) amin'ireo olom-pantatrao sy namana izay manana diagnostika mitovy aminao ihany koa.
VIDEO - Fanatanjahan-tena 7 ho an'ny Rheumatists
Tsy manomboka ve ilay horonantsary rehefa manindry azy ianao? Manandrama manavao ny navigateur na Jereo mivantana amin'ny fantsona YouTube izahay. Aza hadino ihany koa ny misoratra anarana amin'ny fantsona raha mila programa sy fampiofanana tsara kokoa ianao.
Betsaka ny manana fibromyalgia dia variana indraindray sciatica fanaintainana ary taratra ho eo amin'ny tongotra. Ny fanaovana fanatanjahan-tena mihenjana sy ny fampiofanana fanazaran-tena toy ny aseho etsy ambany miaraka amin'ny fanetsehana mora dia mitarika fibra hozatra mihetsiketsika kokoa ary tsy dia mihenjana ny hozatra - izay mety hiteraka sciatica kely kokoa. Soso-kevitra ny hamelatra anao 30-60 segondra mihoatra ny 3 set.
Lahatsary: ​​Fanaovana fanatanjahantena 4 ho an'ny Syndrome Piriformis
6. Yoga sy fisainana
Ny yoga dia mety mampahery antsika amin'ny fibromyalgia.
Indraindray ny fanaintainana dia mety ho tafahoatra ary avy eo dia mety ilaina ny mampiasa fanazaran-tena malefaka yoga, teknika miaina ary fisaintsainana mba hifehezana indray. Maro koa no mitambatra yoga amin'ny tsihy akupresy.
Amin'ny fampiharana yoga miaraka amin'ny fisaintsainana dia afaka mifehy tena tsimoramora ianao ary manalavitra ny fanaintainanao rehefa sendra azy ireo mafy indrindra. Ny vondrona yoga dia mety tsara amin'ny fifandraisany amin'ny fiaraha-monina, ary koa mety ho kianja ahafahana mifanakalo hevitra sy fanandramana miaraka amin'ireo fitsaboana sy fanatanjahan-tena samihafa.
Ireto misy fanazaran-tena yoga samihafa azo andramana (misokatra ny rohy ao anaty varavarankely vaovao):
- Fanatanjahantena yoga 5 ho an'ny fanaintainan'ny Hip
- Fanatanjahantena yoga 5 ho an'ny fanaintainana miverina
- 5 Fanatanjahantena yoga manohitra ny tendany mavesatra
Fanoloran-tena ho an'ny tenany manokana amin'ny fanaintainana Rheumatism sy fanaintainana mahatsiravina
famatrarana Noise (toy ny ba kiraro fanerena izay manampy amin'ny fitomboan'ny rà mandriaka mankany amin'ny hozatra marary na fonon-tànana famatrarana namboarina manokana manohitra ny soritr'aretin'ny rheumatic amin'ny tanana)
Crème Arnica na fanafanana hafanana (tatitra maromaro momba ny fanatsarana ny fampiasana)
Famintinana: Fanatanjahan-tena sy teknika fialan-tsasatra ho an'ireo manana Fibromyalgia
Ny Fibromyalgia dia mety hanelingelina tanteraka sy manimba amin'ny fiainana andavanandro.
Noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra fanatanjahan-tena malefaka izay mety ihany koa ho an'ireo manana fahatsapana fanaintainana avo kokoa amin'ny hozatra sy tonon-taolana. Manentana ny rehetra ny hiaraka amin'ny vondrona mpanohana ny Facebook maimaimpoana Rheumatism sy fanaintainan'ny aretina - Norvezy: Fikarohana sy vaovao izay ahafahanao miresaka amin'ny olona mitovy hevitra aminy, mijanona amin'ny vaovao momba an'io lohahevitra io sy mifanakalo traikefa momba ny fifanakalozana.
Aza misalasala mizara amin'ny haino aman-jery sosialy
Averiko indray, mangataka anao izahay hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny blôginao (aza misalasala mifandray mivantana amin'ilay lahatsoratra). Ny fahatakarana sy ny fifantohana bebe kokoa no dingana voalohany mankany amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ho an'ireo manana fibromyalgia.
Soso-kevitra momba ny fomba hanampiana
Safidy A: Mizarà mivantana amin'ny FB - Adikao ny adiresy tranokala ary apetaho amin'ny pejy facebook anao na amin'ny vondrona facebook misy ifandraisany amin'ny maha mpikambana anao. Na tsindrio ny bokotra "SHARE" etsy ambany raha hizara bebe kokoa ny lahatsoratra amin'ny facebook.
(Tsindrio eto raha hizara)
Fisaorana lehibe ho an'ny rehetra izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny fahatakarana ny fibromyalgia sy ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana.
Safidy B: Rohy mivantana amin'ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao.
Safidy C: Manaraha sy mitovy Pejinay Facebook (tsindrio eto raha ilaina)
Fanontaniana? Sa te hamandrika fotoana amin'ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana misy anay ianao?
Manolotra fanombanana, fitsaboana ary fanarenana maoderina izahay amin'ny fanaintainana mitaiza.
Aza misalasala mifandray aminay amin'ny alalan'ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana manokana (misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny topimaso momba ny toeram-pitsaboana) na eo ny pejy Facebook-anay (Vondtklinikkene - Fahasalamana sy Fanatanjahan-tena) raha manana fanontaniana ianao. Ho an'ny rendez-vous dia manana famandrihana an-tserasera XNUMX ora eny amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany izahay mba hahitanao ny fotoana fifampidinihana izay mety aminao. Azonao atao ihany koa ny miantso anay ao anatin'ny ora fisokafan'ny toeram-pitsaboana. Manana departemanta interdisciplinary izahay ao Oslo (anisan'izany Lambertseterary Viken (Råholt og Eidsvoll). Manantena ny hihaino anao ny mpitsabo mahay anay.
NEXT PAGE: - Fikarohana: Ity no sakafo Fibromyalgia tsara indrindra
Tsindrio ny sary etsy ambony hihetsika any amin'ny pejy manaraka.
- Aza misalasala manaraka ny Vondt.net ao amin'ny YOUTUBE
- Aza misalasala manaraka ny Vondt.net ao amin'ny FACEBOOK
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-øvelser-mot-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2017-09-12 15:45:552022-03-22 15:39:076 Fanatanjahantena ho an'ireo manana Fibromyalgia
Ny fanaintainana ao anaty sy eo amin'ny tampon-tànana amin'ny alàlan'ny fanerena Mitotongana ao amin'ny L4 / L5 aorian'ny fisandratana mavesatra